Mogadishu Journal » 2018 » December » 6
Mjournal :-Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed C/llaahi Farmaajo ayaa ka tacsiyadeeyay geerida ku timid Taliyihii, Abaanduulihii iyo askar ka tirsan Qaybta 12-ka Abriil ee Ciidanka Xoogga Dalka Soomaaliyeed, kuwaasoo ay miino dhulka lagu aasay kula qaraxday meel u dhow deegaanka...
Mjournal :-Wararka naga soo gaaraya Dhanaane ee Gobolka Shabeelaha Hoose ayaa sheegaya in kolonyo gaadiid ah oo ay wateyn ciidamada xooga gaar ahaan qeybta 12’ka April uu qabsaday qarax kol sii horeysay wadada hareeraheeda lagu aasay. Wararka ayaa intaas ku daraya in qaraxaasi ay...
Mjournal :-Gudoomiyaha Aqalka Sare ee dalka Cabdi Xaashi C/laahi & Wafdi uu hoggaaminaayo ayaa goor dhaw gaaray Magaalada Kismaayo ee xarunta KMG ee Maamulka Jubbaland. Waxaana garoonka diyaaradaha ee Magaalada Kismaayo si diiran ugu soo dhaweeyay Madaxweynaha Maamulka...
Mjournal :-Ciidamada dowladda Soomaaliya iyo Ururka Al-Shabaab ayaa ku dagaallamaya degaano ka tirsan gobolka Gedo sidda ay xaqiijiyeen Saraakiisha Ciidanka dowladda ee gobolka Gedo. Ciidanka dowladda kuwo Jubbaland ayaa lagu soo waramaya in ay Saakay weerar ku qaadeen degaano ay...
Mjournal :-Dowladda Itoobiya ayaa sheegtay Soo saarista Shidaalka degaanka Soomaalida laga helay in lagu soo gabagabeeynayo saddex sano, islamarkaana intaasi ka dib la bilaabi doono dhoofinta Shidaalka. Wasaaradda Macdinta, Shidaalka iyo Saliidda Dabiiciga ee Itoobiya ayaa...
Mjournal :-Diyaaradaha aan duuliyaha laheyn ee Mareykanka ayaa Arbacadii ina dhaaftay Duqeyn la beegsaday saldhig Ururka Al-shabaab ay ku leeyihiin Degmada Awdheegle ee Gobolka Shabeellaha hoose. War qoraal ah oo ka soo baxay Taliska Mareykanka Afrika ee AFRICOM ayaa waxaa lagu...
Mjournal :-Faah faahin dheeraad ah ayaa ka soo baxeysa dad ku sumoobay degaanka Ceel-daahir oo hoos taga degmada Carmo ee gobolka Bari sidda ay xaqiijiyeen mas’uuliyiin ka tirsan maamulka gobolka Bari. Faadumo C/laahi Cade oo ah maamulaha Isbitaalka degmada Carmo ayaa...